Maalinta: Abriil 24, 2020
Hadiyadda Internetka ee Macaamiisha Mobilada ee Bisha Ramadaan
Wasiir Karaismailoğlu wuxuu qiimeeyay go’aammada ka soo baxay kulanka kadib uu la yeeshay maamulayaasha guud ee shirkadaha ka shaqeeya GSM iyada oo loo marayo kulanka fiidiyaha. Karaismailoğlu wuxuu sheegay in tirada macaamiisha mobilada gaareysa ay gaarayaan 2020 milyan marka la gaaro 81, Karaismailoğlu wuxuu yidhi, Waxaan aragnay tallaabooyin Kovid-19 [More ...]
No Dib ee Turkey ee Guriga Car tOGGer
Wasiirka Warshadaha iyo Technology Mustafa Varank, "New Journey" la dhiga ka sameeyey bandhig on December 27 ayaa sheegay in gaariga Turkiga off. Wasiirka Varank wuxuu yiri shaqadu si isdaba joog ah ayey u socotaa, “Riyo halis ah ayaa ku jirta gaarigayaga gudaha [More ...]
Zehra Zümrüt Selçuk, Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, Gargaarka Bulshada iyo Midnimada (SYD) ee loogu talagalay dadka baahan ee aan buuxin karin baahiyaha aasaasiga ah ee cuntada ka hor bisha Ramadaan iyo qaraabada iyo halyeeyada. [More ...]
Istaatiifada Lug La Xiriirinta ee Ka Soo horjeedka Covid-19 Virus-ka IMM
Muuqaalka sawir qaade ayaa ku socda isgoysyada lugeynaya ee magaalada Istanbul. "Ha taaban batoonka, iskutallaabta la wadaag" Caafimaadka Magaalada Istambul (IMM) mid cusub ayuu ku daray tillaabooyinka ay qaadi doonto fayraska COVID-19. Isgoysyada lugeynaya ee magaalada Istaanbuul ayaa hada ah kuwo aan lasoo xiriirin, [More ...]
Shaxda Iftar Table ee Magaalada İzmir iyo Codsiga Maskematic ee Saxaafadda Caalamka
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay ka qaadatay joornaalka Isbaanishka iyadoo la adeegsanayo Iftar Table iyo websaydhka Ururka Magaalooyinka Reer Yurub iyadoo la adeegsanaayo dalabka Maskematic. Howlaha Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir ee ku aaddan dagaalka ka dhanka ah faafitaanka coronavirus wuxuu halis gelinayaa adduunka. [More ...]
Annaga oo ah Groupe Renault iyo Oyak Renault, ahmiyadeenna koowaad waa markasta inaan ilaalinno caafimaadka shaqaalahayaga. Iyadoo la raacayo macluumaadka iyo tilmaamaha ay wadaagaan maamulada dalka iyo kuwa caalamiga ah, gaar ahaan Wasaaradda Caafimaadka, shaqaalaheena [More ...]
Milkiilayaasha Fiat, Alfa Romeo iyo baabuurta sumadda leh, oo baabuurtooda ku burburin kara si bilaash ah bilaa adeeg, Tofaş wuxuu matalaa nooc cusub oo cudurka 'coronavirus' (Covid-19) si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada. [More ...]
Covid-19 Dillaaca si loo Dardar-geliyo Wada-noolaanshaha Qulqulka Adduunka
Tan iyo bilowgii taariikhda qoraalka, cuduro badan oo faafa ayaa sababay dhimasho aad u tiro badan, laakiin waxay keeneen isbeddelo dhaqan-dhaqaale. Ogaashada in cudurrada faafa ay door muhiim ah ka ciyaaraan sameynta xaqiiqooyin cusub oo taariikhi ah [More ...]
Khubaradan ayaa hoosta ka xariiqay in ogaanshaha hore uu muhiimad gaar ah u leeyahay bukaannada wadnaha, “Bukaannada wadnaha inta ay joogaan guriga, sida wadnaha ama qandho, daciifnimo, qufac qalalan, cuna xanuun iyo neefta oo ku qabata. [More ...]
Shir-hawleed Waxsoosaar Dukaan Birta ah oo ku yaal magaalada İzmir Demir Çelik ayaa la bilaabay
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş wuxuu go’aansaday inuu ku bilowno wax soosaarka waaxda dukaannada birta. Bayaanka lagu sheegay barnaamijka shaacinta dadweynaha (PDP), waxaa lagu yiri: "Sida lagu sheegay sharaxadeennii hore, natiijada ka dhalatay saameynta Covid-19, [More ...]
2. Sheekada Wadooyinka Wadooyinka Loo Cusbooneysiiyay Ixtiraamka Abdulhamid Han
Suldaan II. Intii lagu guda jiray dhismaha Madinah qeybta tareenka ee Hejaz, Abdulhamid Khan wuxuu sameeyay Hz. Wuxuu codsaday in la dadaalo si looga hortago buuqa iyo gariirka si loo ixtiraamo shakhsiyadda Muxammad. Ujeedadaas darteed, biraha ku wareegsan farsamada muddadaas [More ...]
Waxaa lagu abaalmariyay Bursa iyadoo la kaashaneysa dowladda hoose ee Bursa Metropolitan iyo TÜBİTAK oo hoos imaaneysa hoggaanka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Bursa (BTSO); Xarunta tababarka duulista hawada ee Gökmen (GUHEM) oo furitaankeeda dib loo dhigay taariikh dambe sababa la xiriira daweynta cudurka 'coronavirus', [More ...]
Tallaabada ugu horreysa waxaa lagu dhammeystirey hannaankii hanuuninta ee 10 shaqaale gaadiid, oo ay ku jiraan 119 haween ah, kuwaas oo ku guuleystay imtixaanka qoraalka ah iyo kuwa farsamada gacanta ah ee Agaasinka Guud ee EGO. Shan ka hooseeya Agaasinka Hawlaha Basaska [More ...]
Bayraktar TB2 Gawaarida Diyaaradaha aan Duuliyaha Ahayn (UAV), oo loo dhiibey Agaasinka Guud ee Amniga ee loo yaqaan Baykar Defence, ayaa hawl galey oo bilaabay inuu shaqeeyo. Waxaa loo diray Agaasinka Guud ee Amniga oo uu u xilsaaray Baykar Defense dhamaadka sanadka 2019 [More ...]
TCDD si loola dagaallamo Cawska qeybta Arifiye Eskişehir
TCDD Arifiye wuxuu la dagaallami doonaa Cawska Qeybta Khadka Eskişehir; The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), sida lagu sheegay hadal ka soo Agaasinka Guud on April 27, 2020 - May 08, 2020 dhexeeya taariikhaha; Arifiye - Eskisehir [More ...]
Basaska iyo taraamyada ayaa si joogto ah ugu faafa Antalya
Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Antalya waxay jabayaan gaadiidleyda dadweynaha ka soo horjeedka coronavirus maalin kasta. Koox ka kooban 170 qof ayaa hawlo nadaafadeed oo faahfaahsan ka wada baabuurta gaadiid qaadista. Maaskaro bilaash ah oo loogu talagalay muwaaddiniinta gaadiidka dadweynaha halkaasoo jeermis-dilayaal la dhigo [More ...]
Adeegyada Gaadiidka ayaa kusii soconaya Sakarya
Xarunta Maareynta Gaadiidka ee xiriirka la leh Agaasinka waaxda gaadiidka dadweynaha, cabashooyinka iyo codsiyada isla markiiba ayaa lagu xaliyaa. Xarunta Maareynta Gaadiidka Dadweynaha ee xiriirka la leh Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada; 23, 24, 25 [More ...]
Taabashooyinka lagu yareeyo Gaadiidka inta dadku gurigooda joogaan
Dowlada Hoose ee Magaalada Konya waxay sameyneysaa qorshooyin wadooyinka bartamaha magaalada iyo dagmooyinka ayagoo ka faa iideysanaya gaadiid la’aanta bandooga dartiis. Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay ayaa taagan isgoyska 18-aad ee bartamaha magaalada iyo [More ...]
Qaybta saddexaad iyo ta ugu dambaysa ee taxanaha maqaalkaaga, waxaan isku dayay inaan sharaxo hanaan taariikhi ah oo ah 109 helikobtar T-70 Black Hawk, kuwaas oo wali ku jira horumar iyo tijaabooyin, adigoon gelin faahfaahin aad u farsamo. Qaybta koowaad ee maqaalka [More ...]
Dhismaha Wadada Wadnaha ee Ankara Niğde ayaa sii socota in kasta oo bandoow la galayo
In kasta oo ay jiraan tallaabooyinka faafa iyo bandowga, jid weynaha Ankara-Niğde ma uusan faragelin dhismaha. Shaqaaluhu waxay ka baqayaan inay xanuunsadaan, laakiin wali way shaqeeyaan inkastoo qatarta ay ka baqayaan in ka badan shaqadooda. Shaqaale ka shaqeeya wadada weyn [More ...]
Gelitaanka iyo Ka bixitaanka Jasiiradaha ayaa la mamnuucay illaa saqda dhexe ee May 31
Galitaannada iyo bixitaannada Jasiiradaha laga bilaabo saqda dhexe ee Abriil 26 ilaa Maajo 31, marka laga reebo kuwa deggenaashoodu ku yaal Jasiiradda, kuwa haysta oggolaanshaha safarka oo wata alaabada aasaasiga ah iyo kuwa bixiya adeegyada korantada, biyaha, gaaska dabiiciga ah iyo xirmooyinka isgaarsiinta. [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay qaadday talaabooyinka iyo talaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago dhibanayaasha shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo muwaadiniinta ay tahay inay shaqeeyaan sababtoo ah waajibaadkooda waajibka ah ee xaddidaadda bandoowga 23-ta maalmood ee la adeegsan doono 24-25-26-4 Abriil. IETT [More ...]
Wasakheynta Hawada waxay kordhineysaa saameynta Coronavirus
Faafida coronavirus, oo muujisay saameyntooda adduunka oo dhan, waxay nolosha u keentay istaag. Daraasad ku saabsan sida uu cudurku u saameeyo caafimaadka aadanaha, saynisyahano ayaa helay xiriirka ka dhexeeya wasakhowga hawada iyo dhimashada coronavirus. Cilmi baarista Jaamacadda Harvard [More ...]